अमुको ‘संकल्प १०१’ : एक दृष्टि (पुस्तक समीक्षा) | चितवन पोष्ट
अमुको ‘संकल्प १०१’ : एक दृष्टि (पुस्तक समीक्षा)
नेपाली साहित्यमा वर्तमान समयमा सर्वाधिक लेखिने, पढिने विधा गजल हो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलगायत विभिन्न साहित्यिक पत्रपत्रिकाहरुमा गजल पढ्न पाइन्छ । देशभर खोलिएका सयौँ एफएम रेडियोहरुबाट गजलसम्बन्धी कार्यक्रमहरु प्रसारण हुन्छन्, जसबाट गजलको लोकप्रियता बढ्दो क्रममा छ ।
हरेक हप्ताजसो काठमाडौँ, चितवन, पोखरा, धनगढी, बुटवल, हेटौँडालगायतका प्रमुख सहरहरुमा एकल तथा संयुक्त गजलसंग्रहहरु विमोचित हुन्छन् ।
यहाँ पंक्तिकारले अम्बिका कार्की ‘अमु’को नवीनतम गजलसंग्रह ‘संकल्प १०१’ माथि समालोचकीय प्रतिक्रिया दिने प्रयास गरेको छ ।
‘संकल्प १०१’ गजलसंग्रहको प्रकाशक स्वयम् अम्बिकाकी छोरी अर्पणा रहेकी छन् । वर्तमान समयका क्रियाशील गजलकार पुष्प अधिकारी ‘अञ्जलि’ले भूमिका लेखेका छन् । वरिष्ठ गजलकारहरु डा. घनश्याम परिश्रमी, केशवराज आमोदी, धनराज गिरी, महानन्द ढकाल, विमल वैद्य, विजय ज्ञवाली, गौरी तमुजस्ता स्रष्टाहरुको यस कृतिमा शुभकामना मन्तव्य रहेको छ ।
अम्बिका कार्की ‘अमु’ (२०३५) चितवनमा जन्मे हुर्किएकी नारी हुन् । सर्लाही घर भई चितवनमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका जवान ओमबहादुर कार्कीसँग उनको प्रेमविवाह भयो र उनी सर्लाही पुगिन् ।
देशमा चलिरहेको गृहयुद्धका क्रममा उनका श्रीमान्को मृत्यु हुँदा उनकी छोरी मात्र १६ महिनाकी दूधे बालिका थिइन् । यस घटनापश्चात् पटकपटक आत्महत्याको प्रयास गरे पनि आफ्नी कलिली छोरीको भविष्यको चिन्ताका कारण मर्न नसकेको कुरा उनले यसै संग्रहको ‘आफ्नै कुरा’ मा बताएकी छन् । पहिला समाजसेवा र पछि व्यवसायमा लागेकी ‘अमु’ यतिखेर भरतपुरस्थित मालपोत चोकमा फेन्सी पसल सञ्चालन गरेर दैनिकी चलाइरहेकी छन् । साथै, उनी ‘मुडुला कार्की सेवा समाज’को केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुन् ।
देशमा कुनै बेला चलेको गृहयुद्धमा मृत्यु हुने सयौँ, हजारौँ सेना र प्रहरीहरुमध्ये उनका श्रीमान् पनि एक थिए । उनले ‘संकल्प १०१’ गजलसंग्रह वीरगति प्राप्त आफ्नै श्रीमान्का नाममा समर्पित गरेकी छन् ।
तिम्रो तस्बिर हेरिरहँदा
गर्वले यो छाती फुल्छ
देशलाई आफ्नो रगत दियौ
शान भयौ सधैँ सधैँ ।
अतीतका तीता–मीठा सबै पीडाहरु भुलाउँदै आफू र आफ्नी छोरीका लागिमात्रै होइन, समाज र राष्ट्रका लागिसमेत बाँच्ने संकल्प यसरी गरेकी छन् :
संकल्प छ एक सय एक
देशका लागि बाँच्छु भन्ने
हरेक तीता कहानीको
अन्त्येष्टि नै गर्छु भन्ने
(गजल १/शेर १)
आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा मानिसहरु चन्द्रमामा पुगिसके । दिनहुँ नयाँनयाँ आविष्कारहरु हुँदैछन्, तर हाम्रो देशमा छुवाछूत प्रथा अझै छ । छाउपडी प्रथा अझैसम्म विद्यमान छ, जसलाई जरैदेखि निर्मूल पार्न उनले सम्पूर्ण चेलीहरुलाई यसरी आह्वान गरेकी छन् :
अन्त्य गर्ने वाचा गर्दै…
नारी हित र हक लिन
लागिपरौँ आऊ चेली ।
अझै पनि हाम्रो गाउँघरमा श्रीमान् गुमाएकी विधवा महिला देख्यौँ भने यात्रा अशुभ हुन्छ, साइत बिग्रन्छ भन्ने चलन छ । श्रीमान् गुमाएका यस्ता पीडित पचासौँ हजार विधवा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै ‘अमु’ यसो भन्छिन् ः
सेतो वस्त्र देखेपछि
हिलो छ्याप्ने समाजले…
जिउँदो हुँदा मारिदियो ।
मान्छेको जुनी हो, जन्मेपछि अवश्य मर्नुपर्छ । फरक यत्ति हो, कोही कम उमेरमा मर्छन् त कोही अल्लि बढी समय बाँचेर । कतिपयले समाज र देशका लागि बलिदानी दिएका हुन्छन् । यस्तै देशका लागि आफ्नो जीवन विसर्जन गर्ने आफ्नो श्रीमान्सँग बिताएका ती प्रेमिल क्षणहरु, मायाप्रेम साटिएका पलहरुसँग हराउन पुग्छिन् ।
तर, स्वप्नलोकबाट बाहिर आउँदा उनमा सम्झनाबाहेक केही हुँदैन । जुन शब्दहरुका माध्यमबाट गजलका शेरहरु बनेर संग्रहमा यसरी संग्रहित छन्:
सम्झेर उनको रुप त्यो
डुब्दै थिएँ कल्पनामा
खोप्छ मुटु, दुख्छ छाती
हृदयमा सरी सरी
उनका गजलका शेरहरुमा राष्ट्रिय भावना, समसामयिक घटना, जिन्दगीका पीडाहरु, दुःख, सामाजिक समस्या, विकृति, विसंगतिमात्रै होइन, प्रेम र प्रणयका भावहरुले पनि स्थान पाएका छन् । नमुनास्वरुप यो शेर :
खस्दा के हुन्छ होला ?
वर्गसंघर्षको कुरा गर्दै बन्दुक समाएर युद्ध गर्नेहरु देशको मूल राजनीतिमा पुग्दा र देशमा गणतन्त्र आउँदासमेत मुलुकमा कुनै परिवर्तन नभएको देखेपछि उनमा आफ्ना श्रीमान्लगायत दसौँ हजार नेपालीहरुको बलिदानी खेर गएको त होइन नि भनेर शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । जस्तोः
लुट्नुसम्म लुटेका छन्
आशा छैन खुनीसँग
व्यर्थै लाग्छ ज्यान मागेको
देशले मेरो उनीसँग
नाता बन्छ सदनबाटै
दुई/चार पैसा हुनीसँग ।
(५०/१ र २)
साहित्यबाट कुनै पनि हृदय विमुख रहन सक्दैन । महाकवि देवकोटाले भनेका छन्, ‘सजीव अनुभवहरुको कलात्मक प्रकाशन नै साहित्य हो ।’ साहित्यमा ‘अमु’ पनि यसरी हराउन चाहेकी छन् :
हराऊँ कि जस्तै लाग्छ
मनभित्रका कुण्ठित भाव
कराऊँ कि जस्तै लाग्छ ।
गाउँकी एउटी साधारण केटी फूलमाया जो गरिबी र अशिक्षाका कारण आफ्ना अनगिन्ती सपनाहरु पूरा गर्न सहरका अस्मिता साटिने ठाउँहरुमा भेटिन थालेकी छे । फूलमाया त प्रतिनिधि पात्रमात्रै हो, ऊजस्ता हजारौँ फूलमायाहरु आज जीवनयापनकै लागि सहरका सयौँ गल्लीहरुमा रूपैयाँसँग जवानी साटिरहेका छन् । यस्ता कुरा गजलका शेरहरुमा सुन्दर तरिकाले प्रस्तुत भएका छन् :
संस्कार, संस्कृति, इज्जतको
मूल्य आज पैसा भयो
खुलेआम उसको काखमा
छोपिन थाली फूलमाया ।
पितृसत्तात्मक मुलुक नेपालमा अझैसम्म पनि आफ्नो मृत्युुपश्चात् चितामा दागबत्ती दिनका लागि छोरा नै चाहिने परम्परा छ । त्यसैले तीन, चार, पाँच, छवटी छोरी पाउँदासमेत छोराको आश गरेर सन्तान पाइरहन्छन् । छोरा पाउनकै लागि दोस्रो, तेस्रो, चौँथो बिहेसम्म गर्छन् ।
तराईका कतिपय जिल्लाहरुमा छोरी जन्मिइन् भने विवाहमा धेरै दाइजो दिनुपर्ने कारण लिंग पहिचान गरी गर्भमै हजारौँ चेलीहरुको हत्या गराइन्छ । कति चेलीहरुलाई भनेजति दाइजो दिएनन् भनेर जिउँदै जलाइन्छ त कतिलाई मार्छन् ।
नारीलाई दुर्गा, काली, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती देवी मानेर पुज्ने हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन हुनुपर्छ अब, अनि यसको सुरूवात स्वयम् हामीबाट हुनुपर्छ भन्ने बलियो तर्क राख्छिन् अमु :
फूल बन्नुअघिको त्यो
जन्म लिन बाँकी
पाइलालाई ननिमोठ ।
नारी देवी हुन्, धर्ती हुन्,
हुन् उग्रचण्डी पनि
यो महान् शक्तिले हरेक
लीलालाई ननिमोठ ।
(१०१/१ र २)
गजलको पहिलो सर्त गायन हो र गायनका लागि बहरमा गजल लेखिनु आवश्यक छ । यहाँ विनाबहरमा लेखिएका गजलहरु गाउन मिल्दैनन् भन्न खोजिएको भने पक्कै होइन ।
फारसी, हिन्दी, उर्दू भाषामा अद्योपान्त गजल बहरमा लेखिन्छन् । नेपाली भाषामा पनि सुरूवाती चरणमा गजल बहरमै लेखिन्थे ।
नेपाली गजलको पुनर्जागरणपश्चात् गजल स्वतन्त्र लयमा पनि लेखिन थाले । यसकारण पनि नेपाली गजल लेखनमा दुईवटा धार रहेको कुरा प्रस्ट देखिन्छ ।
एकथरी गजलकारहरु बहरमा लेख्छन् र अर्काथरी स्वतन्त्र लयमा । अम्बिकाले ‘संकल्प १०१’ मा विभिन्न बहरमा लेखिएका १२ वटा गजलहरु समावेश गरेकी छन् । केही नमुुना शेरहरु यस्ता छन् :
दियौ माया मनै भुल्न
लिएझैँ भयो मलाई
जगायौ प्रेम प्रेमीको
जिएझैँ भयो मलाई ।
कति साँचौँ शून्य लाग्दो
जिन्दगानी ए हजुर
मेरो जवानी ए हजुर ।
त्यो शिखरमा टेक्न छोडी
बेच्छ आस्था वासनामा
खेप्छु भन्दा दुख्न थाल्यो
आज आफ्नै जिन्दगानी ।
गजलको अन्तिम शेर (मक्ता) मा गजलकारले आफ्नो नाम या उपनामको प्रयोग गर्छन्, जसलाई तखल्लुस पनि भनिन्छ । “संकल्प १०१’ का गजलहरुमा अम्बिकाले तखल्लुसको प्रयोगमा कन्जुस्याइँ गरेकी छन् । तर, जतिपटक प्रयोग भएको छ ती मक्ताले गजलमा थप मिठास भरेको छ :
तराई, पहाड, हिमाल नै
उजाडिलो भएको छ
मरूभूमिमा ‘अम्बू’ पनि
रमाउन सकूँ भन्यौ ।
बिरानो म ‘अम्बू’
ठहर जिन्दगीको ।
गजल लेखनको छोटो समयमै अम्बिकाले राम्रा गजलहरु लेखेर आफूलाई गजलकारहरुको सूचीमा स्थापित गर्ने तयारीमा छन् ।
उनका गजलहरुमा भावले प्रमुख स्थान ओगटे पनि कतिपय गजलहरुमा काफियाको प्रयोगमा विचलन भेटिन्छ । मिसरा–ए–उला र मिसरा–ए–सानीबीचको सम्बन्धमा ध्रुवीय अन्तर भेटिन्छ । यद्यपि, उनको यो पहिलो पुस्तकाकार एकल संग्रह भएकोले पनि यस्ता कमीकमजोरीहरु भेटिनु स्वाभाविकै हो ।
उनका गजलहरु लेखनीका हिसाबले तुलनात्मकरुपमा सशक्त बन्दै गैरहेका छन् । यसकारण पनि ‘संकल्प १०१’ गजलसंग्रह पठनीय, संग्रहणीय कृति बनेको छ ।
अन्त्यमा, आगामी दिनहरुमा पनि अम्बिकाको साहित्यिक लेखनीले निरन्तरता पाइरहोस् । उनको व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक एवम् साहित्यिक उन्नयनको कामना गर्दछु । ‘संकल्प १०१’ मा जस्तै यो पंक्तिकारले उनका अन्य कृतिहरुमाथि पनि यसरी नै समालोचकीय प्रतिक्रिया दिन पाइराखोस् । जय गजल, जय साहित्य !